Mayelana NATHI - Hebei Shenli Rigging Co., Ltd.
I-Hebei Shenli Rigging Group igxile ekwakhiweni, ekukhiqizweni nasekuhanjisweni kwemikhiqizo ehlukahlukene yokuphanga nemishini yokuphakamisa eChina kungakapheli iminyaka engaphezu kwengu-20.
Yaqalwa ngonyaka we-1998, inkampani yethu ingumboni osebenza kakhulu ekuphakamiseni imishini nomkhiqizo kufaka phakathi ibanga le-80, i-grade 80 yokuxhuma, i-grade 80 master link, ibanga lama-80, amaketanga ebanga lama-80 neminye imishini yokuphanga kaGrade 80 neBanga 100.
Inkampani yethu ihlale iphethe isikhundla esiholayo ngokwesikali sokukhiqiza, ubuchwepheshe nemishini esezingeni eliphakeme. Sinamasethi angaphezu kuka-100 emishini nezinsiza, amasethi angaphezu kwe-10 okuhlola nokuhlola imishini ukuqinisekisa ubuningi nekhwalithi yethu.
Sithuthukise amasistimu wokuklama we-2D & 3D CAD, isikhungo sokubumba i-CNC kanye nesistimu ye-annalysis laboratory yezinto ezibonakalayo. Sinamandla okuphela e-R & D yokukhiqiza kuzo zonke izinhlobo zemikhiqizo yokukhohlisa neminye imikhiqizo ehlanganisiwe.
Inkampani yethu itshale izimboni ezingaphezu kwezingu-5 ezikhiqiza izigaxa zezintambo, amabhlogo wamaketanga, iloli lezandla nezinye izinto zokuphakamisa. Sinabasabalalisi abakhulu abangaphezu kwama-600 emakethe yasekhaya. Sisungule futhi sakha ukubambisana kwethu kwamazwe omhlaba eminyakeni engaphezu kwengu-10. Kuze kube manje, imikhiqizo yethu ithunyelwe emazweni amaningi nasezifundeni emhlabeni jikelele.
Inkampani yethu isidlulile isitifiketi sohlelo lokuphathwa kwekhwalithi ye-ISO9001 ngo-2010 kanye nesitifiketi sohlelo lokuphathwa kwemvelo se-ISO 14001 ngonyaka ka-2015. Yonke imikhiqizo yethu yokugqagqana isidlulile izitifiketi ze-EU CE kufaka phakathi nohla lwethu lokuphakamisa iBanga 80. Uphawu lokuhweba luka- “JULI” lwabonwa njenge- “CHINA FAMOUS BRAND” ngonyaka we-2013 futhi sesibe yilungu le- “CHINA QUALITY SECRITY ENTERPRISE ASSOCIATION”.
Inkampani yethu ihlose ukuba ne win-win ukubambisana namakhasimende emhlabeni jikelele. Abasebenzi bethu bahlwanyelwe kahle, banolwazi olunothile kwezobuchwepheshe kanye nolwazi lokusebenzela abanye. Singakunika izeluleko nezisombululo ukuze ukwazi ukuxhasa izimfuno zamakhasimende ethu.
Imikhiqizo yethu yabonwa njenge- "HEBEI FAMOUS PRODUCTS" futhi uphawu lwethu "JULI" lwabonwa njenge- "CHINA FAMOUS BRAND" ngo-2013 futhi sesibe yilungu ku- "CHINA QUALITY SECRITY ENTERPRISE ASSOCIATION".